★မြန်မာ့အလင်း★: မကောင်းတဲ့အလုပ်ပဲ စောက်ကုလားတွေလုပ်ကြတယ်။ ဒါက ဘင်္ဂလားဒေ့တဲ့
မကောင်းတဲ့အလုပ်ပဲ စောက်ကုလားတွေလုပ်ကြတယ်။ ဒါက ဘင်္ဂလားဒေ့တဲ့
Posted by ★သခင်မျိုးဟေ့ဒို့မြန်မာ★ at 10:21 AM
မင်းကြည်.၇တာ ကိုယ်စီးတဲ.မြင်းအထီးလားအမလား သိပုံမ၇ဘူး မင်း ၁၀နှစ်ကျွန်ခံခဲ.တဲ.မလေး၇ှားက အစ္စလာမ်နိုင်ငံကွ ဝန်ကြီးချုပ်ကြီးနာမည်ကိုကြည်.အုံးမဟာသီယာမိုဟာမက် တို. ဘာဒါဝီတို. အစ္စလာမ်နာမည်တွေ အဲ.နိုင်ငံမှာ၇ှိတဲ.တ၇ုတ်က အစ္စလာမ်ဘာသာကိုးကွယ်တဲ.သူနဲ. တ၇ုတ်နတ်ကိုးကွယ်တဲ.လူပဲ၇ှိတယ် Company ပိုင်၇ှင်တွေကလဲ မလေးမူဆလင်တွေကွ မင်းလို အိမ်သာဆေးတဲ.ကောင်ကတော.ဘယ်သိပါ.မလဲ
မင်းတို.ဗမာနိုင်ငံက ခေါင်ချုပ်ကြီး သန်းေ၇ွှတောင် ဗုဒ္ဒဘာသာမကိုးကွယ်တော.ဘူး
ကို pyaypa ရေ သူများစော်ကားတိုင်း ကိုကလိုက်
ခရစ်ယာန်တွေပါ။ သူတို့ ပထွေးခိုင်းလို့ လုပ်နေတာ
လား သူများဘာသာတွေကို စော်ကားချင်လိုစိတ်နဲ့ ပဲ
ဒီကောင်တွေ ဖွင့်ထားတဲ့ blogတွေက အများကြီး
ဗုဒ္ဒစေတမန် ဆိုပြီးတော့လဲ ဗုဒ္ဒဘာသာကိုစော်ကား
တယ် အစ္စလာမ်ဆန့် ကျင်ရေးဆိုပြီးတော့လဲ
ဒီကောင်တွေ blog မှာပြထားတဲ့ ပုံတွေကိုကြည့်
ပြီး ဗုဒ္ဒဘာသာလို့ တော့ မထင်စေချင်ဘူး။
ဘာသာရေးနဲ့ ရင်ကျက်နေသူတွေအဖို့ ကတော့
ဒီကောင်တွေကတော့ ခွေးလောက်မှ အဆင့်မရှိတဲ့
ကောင်တွေပဲ ကိုpyaypa ရေ။
မှန်တယ်ဗျို့.. ကိုpyaypaရေ.. ကျနော်လည်းဒီဇော်မျိုး
သံသယရှိသားဗျ.. ဘာလို့လဲဆိုတော့ ဒီကောင်ကသူများ
ဘာသာရေးကိုပဲ ကုတ်ဖဲ့နေလို့ပါ. ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်မဟုတ်လို့ ဒီလောက်မိုက်ရိုင်းနေတာမို့ ဖက်ပြီး ပြိုင်မနေပါနဲ့ဗျာ.. ခွင့်လွှတ်လိုက်ပါ..
ဒီကောင်တွေကအဖွဲ့ လိုက် ပုတ်ခက်နေတဲ့ကောင်တွေ
ကိုတော်ချောဆိုပြီးတော့လဲ ဗုဒ္ဒစေတမန်ဆိုတဲ့ blog ကိုဖွင့်ပြီးတော့ စော်ကားတယ်။ အခုလဲ နမည်ကိုကြည့်ပါလား။
သခင်မျိုးဟေ့ဒို့ မြန်မာ တဲ့ဒါတမင်သက်သက်
သူ့ တို့ ကိုသူတို့ ဗုဒ္ဒဘာသာလို့ ထင်အောင်
နမည်ပေးထားတာနေမယ်။ ခွေးမျိုးတွေ တက်လဲတက်နိုင်တယ်။